Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba » Abantu baseMelika banokuhamba njani baye eCanada phantsi kwemithetho emitsha?
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
ICanada Ivula Umda Womhlaba Kwabantu AbaseMelika Abagonywe Ngokupheleleyo
Esi sigqibo siza kukhuthaza uhlobo lokubuyiselwa koqoqosho kummelwane wethu wasemantla ofunekayo kweli cala lomda.
ICanada iqala ukwamkela abagonywe ngokupheleleyo abantu baseMelika emva komda womhlaba.
I-Canada ngowona mthombo mkhulu wentengiso wamazwe aphesheya waseMelika kwaye wenza iipesenti ezingama-26 zazo zonke iindlela ezihamba ngaphakathi ngo-2019.
Ukuvela kolu bhubhane kuya kuqhubeka kuyinkqubo entsonkothileyo eguqukayo.
I-Canada ivule ngokusesikweni imida yayo yomhlaba ukuba igonywe ngokupheleleyo abemi base-US kunye nabahlali abasisigxina e-US nge-12: 01 ngoMvulo, nge-9 ka-Agasti ka-2021.
Abantu baseMelika ngoku banokundwendwela iCanada okokuqala ukusukela oko umthetho we-COVID-19 wohambo wabanjwa. Oku kubhengezwe okokuqala kwiveki ephelileyo.
Ukuhamba kwe-US njengeintlalontle UMongameli kunye ne-CEO uRoger Dow bakhuphe le ngxelo ilandelayo malunga nokususwa kwemiqobo yanamhlanje kubahambi abagonywe ngokupheleleyo baseMelika kumda womhlaba waseCanada:
“Namhlanje, iCanada iqala ukwamkela abantu baseMelika abagonywe ngokupheleleyo ngaphesheya komda womhlaba. Esi sigqibo sobulumko siya kukhuthaza uhlobo lokubuyiselwa koqoqosho kummelwane wethu wasemantla ofunekayo ngoku kweli cala lomda.
“Ukuvula kwakhona umda womhlaba wase-US ukuba ugonywe ngokupheleleyo abantu baseKhanada kuya kuphawula indawo elungileyo yokwakha uqoqosho lwethu, kwaye abaphathi beBiden kufuneka basibuyise esi sigqibo somgaqo-nkqubo-ngenxa yezinga eliphezulu lokugonya eCanada yonke - ngaphandle kokulibazisa.
“Nyanga nganye olo hambo luhleli lumi ndawonye, ​​i-US iphulukana ne-1.5 yeebhiliyoni zeerandi kuthengiso oluthunyelwa kumazwe angaphandle kwaye ishiya uninzi lwamashishini aseMelika esesichengeni.
“I-Canada lelona lizwe likhulu laseMelika kwimarike yokuhamba kwaye ibala iipesenti ezingama-26 zazo zonke iimoto ezithengiswayo ngo-2019, ezixabisa i-22 yeebhiliyoni zeerandi kwingeniso yonyaka yokuthumela ngaphandle. Nokuba uhambo olusuka eCanada lubuyela kwisiqingatha nje samanqanaba e-2019 ngo-2021, i-United States iya kuvuna phantse i-5 yezigidigidi-ukuba umgaqo-nkqubo wase-US uyavuma.
“Ukuvela kwalo bhubhane kuzakuqhubekeka ukuba yinkqubo entsonkothileyo neguqukayo. Eyona mpendulo isemagqabini yi-White House kukumisela imigaqo-nkqubo emalunga nokuhamba kwamanye amazwe ukuze isebenze njengomzekelo welizwe eliza kuvulwa kwakhona ngokukhuselekileyo nangokuthembekileyo. ”